‘Miaraka Amin’ny Fanohanan’ny Tompo’: Hoy Ny Fampielezan-Kevitra Iray Tao Amin’ny Firenena Sovietika Taloha Hany Manaja ny Demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraChynara Bakyt kyzy and Sagipa Chorobekova
Voadika ny 28 Septambra 2015 3:53 GMT
Tamin'ny fifidianana 2010 tao Kyrgyzstan ny antoko maitso nanao ny teny filamatra ‘Toherina Avokoa’, izay anisan'ny voasokajin'ny mpifidy anisan'ny tsy mitongilana amin'antoko. Tamin'ity taona ity, tsy nisy ny nahasahy nanao tahaka an'io, saingy marobe ireo hadalana hafa tamin'ny fampielezan-kevitra. Sary nalaina tao amin'ny Mylesgsmith.com ary nahazoan-dalana.
Satria efa akaiky ny fifidianana parlemantera amin'ny 4 Oktobra ao Kyrgyzstan, lasa lavitra ny ataon'ireo antoko politika mba hahazoana ny fo aman-tsain'ny mpifidy efa zatra adinoina rehefa tapitra ny fifidianana.
Antoko 14 no hifaninana amin'ny fifidianana parlemantera ao anatin'ny firenena mahantra ahitana mponina efa ho enina tapitrisa voahodidina [firenena anjakan'ny] didy jadona.
Tsy tahaka ny fifidianana ao Kazakhstan, Ozbekistan ary Tajikistan, firenena manodidina azy, izay samy nitondra nandritra roapolo taona tsirairay ny olona telo filohan'izy ireo, tsy hisy ny taha-pivitrihana 90 isanjato sy fandresena miezinezina.
Noho ny fananganana lalàmpanorenana ifangaroan'ny fironam-pahefana parlemantera-filohampirenena, 65 ny isan'ny seza betsaka indrindra mety ho azon'ny antoko amin'ny isa 120 totalin'isan'ny Jogorku Kenesh (Parlemanta).
Na dia mahazo izany seza betsaka indrindra aza ny antoko iray, mbola misy seza 55 azo ifandrombahana. Noho izany, mampiasa ny sehatra rehetra azo ampiasaina ho azy ireo hanaovana fampielezan-kevitra ara-politika ireo antoko.
[Ao amin'ny sary: Mampiasa omby ny antoko Ata-Meken mba hanasongadinana ny marikany] Dikan-teny: Fampielezan-kevitra ara-politika amin'ny fanao Kyrgyz.
Anisan'ireo antoko mavitrika tanteraka tamin'ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra ny Ata-Meken, ny Antoko Demaokratika Sosialy (SDPK), Onuguu-Progress, Respublika-Ata Jurt ary ny Bir Bol.
Ny mpifaninana goavana indrindra dia ny Antoko Demaokratika Sosialy Kyrgyzstan, tarihin'ny filoha Almazbek Atambayev. SDPK no antoko Kyrgyz tokana nisolo-tena ireo fiarahan'antoko dimin'ny fitondrana hatramin'ny fifidianana farany tamin'ny 2010.
Na dia afaka mampiasa ireo fitaovam-panjakana mba hahazoan'izy ireo vato aza ny SDPK, maro ny manamarika fa tsy dia misy fiovana firy tao amin'ny firenena nandritra ny dimy taona nifehezan'izy ireo toerana ambony tao amin'ny governemanta izany.
Niparitaka haingana tao amin'ny aterineto Kyrgyz ny sary eto ambany. Na dia mety hoe olona tsy manan-kialofana aza ilay lehilahy nalaina sary, na lehilahy mamo, na lehilahy matory fotsiny amin'ny andro mafana ao amin'ny repoblika, maro ireo nilaza fa mpiasan'ny antoko mpifandrina mikendry ny hanaratsy endrika ny SDPK izy.
[Eo amin'ny sary: lehilahy torana eo amin'ny dabilio anoloan'ny dokambarotra fampielezan-kevitry ny SPDK – Anjara Herinao!] Dikan-teny: SDPK tilikambon'ny herintsika!
Fanaon'ny antoko malaza hafa nandritra ity fampielezan-kevitra ity ny fampisehoana maimaim-poana ho an'ny olom-pirenena. Tamin'ny tapany voalohan'ny hetsika, mitsangana ny antoko politika ary manao fampanantenana, raha niakan-tsehatra sy mampiala-voly ny mpijery ilay mpihira pop Kyrgyz malaza tamin'ny tapany faharoa.
Maro ny nilaza fa manampy ireo antoko politika mba hahatonga ny mpijery hanadino ireo fampanantenana vao avy nolazaina ny hira. Araka ny filazan'ny fikambanana tsy miankina ho an'ny Demaokrasia sy ny Firaisamonim-pirenena, fampisehoana maimaim-poana an-jatony mahery no notontosaina tao anatin'ny tapa-bolana voalohany nanaovana ny fampielezan-kevitra nanomboka tamin'ny 4 Septambra.
Ho an'ireo antoko politika tsy manana fehin-kevitra politika manokana, ny fandrendreham-bahoaka no ao anatin'ny fandaharam-potoana. Antoko iray tarihin'ny mpioko avy amin'ny antoko tao amin'ny parlemanta ankehitriny no nanapa-kevitra hanome ny anarany avy amin'ny anaran'ny firenena ihany.
Ny teny fanevan'ny antoko ‘Kyrgyzstan’ dia ‘Fampanantenana hafa, vitantsika!’, saingy lasa resabe tao amin'ny tambajotra sosialy izany teny faneva izany toy ny hoe ‘Fampanantenana hafa, mampanantena bebe kokoa Izahay!’
Misy koa ny antoko politika kely kokoa milaza tena ho “Kyrgyzstan Lehibe”, miezaka manararaotra ny lazan'ny silamo tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny firenena ahitana silamo maro an'isa, mampiasa ny teny filamatra mampandresy ‘Miaraka amin'ny Fanohanan'ny Tompo’.
[Eo amin'ny sary: Kandidà amin'ny endrika mivavaka ny tanany tao amin'ny lahatsoratra seraseram-bahoaka mampiseho ny teny filamatra ‘Miaraka amin'ny fanohanan'ny Tompo’, ‘Aza amidy ny safidinao, mandiniha ry oloko!’, ‘Ao anatin'ny finoan'ny olona no misy ny herintsika’.] Dikan-teny: Saika nahafaty ahy ity dokambarotra goavambe ity vao haingana.
Maro ny vahoaka naneho ny ahiahiny momba ny fandaniam-poana amin'ny fampielezan-kevitra ao amin'ny firenena izay 200 dolara monja isam-bolana ny salan-karama, ary vitsy no matoky ireo mpanao politika hanaja ny fampanantenan'izy ireo rehefa ao anatin'ny fanaovan-dalàna.
Niteraka sary fampihomehezana kely mihitsy tsy fitiavana ankapobeny ny kilasy politika manao fampielezan-kevitra ka namorona fampanantenana tamin'ny propangadin'ny Antokon'ny “Adalan'i Kyrgyzstan” ny mpisera Twitter:
Ny Antoko “Adalan'i Kyrgyzstan”: Tsy maninona izay hofidianao, hahazo fahefana foana izahay na izany aza.